Blog Page – Page 3 – birmaduu gospel media
Akeeki Waaqayyo nuu hundumaaf qabu waa tokko, innis jireenya. Amma yeroo fuula isaa dura deddebinu kanatti jireenya guutuu, jechuun toles, yoo ka bades ta’e, yeroo amma qabnu kanatti ija keenya abdii Waaqayyo nu fuldura kaa’e irra keyyanne, battala ammatti garu guututti akka jiraanuudha. Continue reading →
Jireenya Jiraachuu fi jireenya dhimma baasu jirachuun waa lama. Duuchadhumatti jirenya jiraachuun, maataan isaa iyyuu jireenya akka ta’e waanta mamsiisu hin qabu. Hata’u iyyuu malee daaqaan jireenya nuti jiraannu hiikaa fi gatii jireenya murteessa. Gatii fi hiikaa kana egaa dhimma baasaa jireenyichaa jenna. Jireenyi keenya jireenya irra darbee dhimma baasuu qaba. Dhimma hawaasa keenyaaf, dhimmaa maatii keenyaaf, akkasumas dhimmaa namoota naannoo keenya jiran maraaf. Continue reading →
Maatii Kiristiyaanaa jechuun maal jechuudha? Maatii warra kan biraatti maaltu adda baasa? Maatin Kirsityaanaa maati Waaqayyooti, fayyinaa fi araara Waaqayyo jala ka jiraattan fi deddebi’anii dha. (Ef. 2: 19) Warra, biyyaa lafaa, qulqullinaa fi araara Waaqayyoo jala hin jiranne hundumaa irra adda. Tarii maatiin kiristiyaanaa eenyu jenna ta’a. Continue reading →